I-Color Change Garnet - Umxube we-spessartite kunye ne-pyrope garnet-ividiyo
tags Tshintsha umbala, garnet
Umxube we-spessartite kunye ne-pyrope. Eli litye libonisa utshintsho lombala oluvela kubumnyama obukhanyayo emini ukuya kwi-pink pink kwi-incandescent light. Iimpawu zinzima kakhulu kwaye zinqabileyo, ezigqithisileyo ze-alexandrite eyabiza.
Ilungu elinqabileyo nelisigxina leqela le-garnet yamagugu. Unqwenela kakhulu ukukwazi ukuguqula umbala. Kuxhomekeke kuhlobo lomthombo wokukhanya. Ukukwazi ukutshintsha umbala udla ngokugqithiseleyo ukuphosakela ngenxa ye-pleochroism. Yiyiphi ikhono lokubonisa imibala eyahlukileyo kuxhomekeke kwinqanaba lokujonga. Nangona iinguqu zombala utshintsho aluxhomekeke kwinqanaba lokujonga. Ngokuqhelekileyo ukuxuba umxube we-spessartite kunye ne-pyrope kwaye kwiimeko ezininzi, kunokuthi kube neengcambu ze-grossularite okanye i-garnet ye-almandine.
Liqela lamaminerali e-silicate. Siyisebenzisa ukususela kwiBronze Age njengama-gemstones kunye ne-abrasives.
Zonke iindidi zeengqungquthela zinempahla efana neyakhe kunye ne-crystal, kodwa zihluke kwiimveliso zamakhemikhali. Iintlobo ezahlukileyo zi-pyrope, kunye ne-almandine, spessartine, i-grossular (iindidi zazo i-hessonite okanye i-cinnamon-stone kunye ne-savorite), i-uvarovite kunye ne-andradite. Amatye enza iisombululo ezibini eziqinileyo: pyrope-almandine-spessartine kunye ne-uvarovite-grossular-andradite.
Ubungakanani benguqu lwemibala lunokuba lukhulu, kuba lidla ngokugqithiseleyo le-alexandrite engcono kakhulu. Uninzi lwala matye luza kubonisa umbala obomdaka obomvu okanye obhedu xa ubonwa phantsi kwemini yendalo, kodwa xa ubonwa ngaphantsi kokukhanya kwe-incandescent, kuya kubonakala kuphakama kumbala obomvu. Kukho nezinye iindidi ezahlukeneyo zokutshintsha umbala ezinokwenzeka. Ukuze uxabise ngokwenene uluhlu olupheleleyo lwegarnet yenguqu, iimpawu kufuneka zigcinwe phantsi kweemeko ezahlukeneyo zokukhanyisa, kubandakanywa kusasa kusasa, kusasa kwemini, ukukhanya kwe-fluorescent kunye nokukhanya kwe-incandescent okanye ikhandlela.
Njengamagugu amaninzi e-garnet, utshintsho lombala alukwazi ukuphathwa okanye luphuculwe naluphi na uhlobo.
I-Formula yeCompile: [Mg3 + Mn3] AL2 (SIO4) - iManganese aluminium silicate
Isakhiwo se-Crystal: ICubic - rhombic, i-tetrahedron
Ubunzima: 7 ku-7.5
Index Index: 1.73 - 1.81
Ubuninzi: 3.65 ku-4.20
Ukungabonakali: Ukungabonakaliyo, okungahambi kakuhle, opaque
Color Color Garnet, evela eTanzania
ukuthenga umbala wendalo utshintsho kwi-shop yethu
Umbala utshintsho lwamabala
tags Tshintsha umbala, Sphene
tags garnet, akude giant, isafire
Tshintsha umbala Chrome Tourmaline
tags chrome, Tshintsha umbala, Tourmaline